Isaphulelo se-Apple Music Student (2020) - Ungasifaka kanjani isicelo? - Ezokuzijabulisa
I-Apple Music yipulatifomu yokusakaza yomculo esekwe kwisisekelo sokubhalisile. Ifana kakhulu nenye ipulatifomu yokusakaza yomculo eyaziwa ngokuthi iSpotify. Ikunikeza ukufinyelela ezingomeni ezingaphezu kwezigidi ezingama-60 futhi inezici eziningi ezimangazayo. Ungalalela nezingoma uma ungaxhunyiwe ku-inthanethi, okusho ukuthi awudingi ukuxhumana ne-WiFi ngaso sonke isikhathi. Ungayilawula ngeSiri nangokulawula izwi. I-Apple Music ize inikeze neziteshi zomsakazo kubasebenzisi bayo.
I-Apple Music ayikuvumeli kuphela ukuthi usakaze noma iyiphi ingoma kusuka kukhathalogi ye-iTunes. Kodwa, ibuye ibeke wonke umculo wakho esigabeni esisodwa, noma ngabe ithengwa ku-iTunes noma ilandwe kuwebhu noma ikopishwe nakwi-CD.
I-Apple Music Student Discount - Imininingwane emfushane
I-Apple Music yethule uhlelo lwabafundi olunikeza isephulelo kubafundi ngokubanikeza isephulelo esingu-50%. Kungenxa yalabo ababhalise ekolishi noma eyunivesithi.
Ngokuyisisekelo, kusho ngokusho kwe-U.S., Lapho okubhaliselwe ngakunye ku-Apple Music kwakubiza u- $ 9.99 ngenyanga, uhlelo lomfundi luzonikezwa cishe ngama- $ 4.99 ngenyanga. Lolu hlelo alutholakali nje e-U.S., Abafundi be-infact bakwamanye amazwe nabo bangakwazi ukusizakala ngalolu hlelo. I-Apple Music ingahluka kancane kwezinye izimakethe. Ngakho-ke, izindleko zohlelo lomfundi zingahluka. Kepha kukonke, kuzoba ngamaphesenti angama-50 entengo ejwayelekile yokubhaliselwe.
Isaphulelo sabafundi be-Apple Music sitholakala kuphela cishe eminyakeni emine, ngemuva kwalokho sizophendukela ohlelweni lomuntu ngamunye. Ukubhaliswa kwe-Apple Music kunikeza abasebenzisi bayo izinzuzo eziningi ze-iTunes, futhi bathola ukufinyelela kukhathalogi yonke ye-Apple Music. Abasebenzisi bazothola ukweqa okungenamkhawulo eziteshini zomsakazo ze-Apple Music nezingoma ezingenamkhawulo kulo lonke ikhathalogi ye-Apple Music. Ungafinyelela futhi kulabhulali yakho ethengiwe futhi edabukile.
Ungasakaza izingoma ezilayishwe ku-iCloud. Into enhle ukuthi, ungagcina izingoma kumtapo wezincwadi wakho ukuze ulalele ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Izitshudeni zikhokha ngamaphesenti angama-50 ngaphansi kokubhaliselwe kwazo kwe-Apple Music ngenyanga uma kuqhathaniswa nezinye njengoba i-Apple Music inika isaphulelo kubafundi.
Ungasithola Kanjani Isaphulelo Sabafundi Bomculo We-Apple?
I-Apple Music isebenzisa izinkampani zangaphandle ezifana noLwesihlanu ukuqinisekisa ukubhaliswa kwakho.Yonke inqubo yokusetha uhlelo lomfundi we-Apple Music ukuthola isaphulelo ilula futhi ilula. Akuthathi cishe imizuzu eyishumi kuya kweyishumi nanhlanu.
Uzodinga i-imeyili yakho yesikole kanye ne-ID yakho yomfundi.Uzodinga futhi indlela yokukhokha eqinisekisiwe exhunywe ne-ID yakho ye-Apple.Ingakhokhwa ngekhadi lesikweletu, ikhadi lesikweletu, noma i-akhawunti ye-PayPal.
Ngezansi kukhona izinyathelo zokuthola isaphulelo ku-Apple Music uma ungumfundi.Yonke le nqubo ingahluka kancane kuye ngokuthi usebenzisa yiphi idivayisi, noma uma usuvele ubhalisile ku-Apple Music.
Ungabhalisela kanjani kuhlelo lomfundi we-Apple Music (lwababhalisile abasha):
Vula i-Apple Music kudivayisi yakho ye-Apple.
Thepha okuthi Okwakho.
Thepha esivivinyweni samahhala.
Thepha ku-Qinisekisa ukufaneleka.
Uma uthepha ku-Verified Eligibility, uzomiyiswa ku-UNiDAYS, okuyiwebhusayithi ezoqinisekisa ukubhaliswa kwakho ekolishi. Uma usuqinisekisiwe nge-Uniday, uzokwazi ukuthola i-Apple Music Student Discount.
Lapha, kufanele ube nekheli le-imeyili elithi '.edu' ukwenza lo msebenzi wenziwe. Ngemuva kwalokho, izinyathelo zingalandelwa ezinikezwa yi-UNiDAYS ukuqinisekisa i-akhawunti yakho. Yilokho kuphela.
Uma usuvele ubhalisele i-Apple Music ngaphambi kokuya ngisho nasekolishi, futhi manje ufuna ukuyishintsha ukuze uthole isaphulelo sabafundi, lokho kungenzeka futhi. Ungashintsha i-akhawunti yakho kalula.
Yebo, ngalokhu ngeke ukwazi ukuthola esinye isivivinyo samahhala se-Apple Music. Kepha, ungathola okubhalisile ngo- $ 4.99 ngenyanga esikhundleni se- $ 9.99 ngenyanga. Ungonga imali eningi kulokho.
Ukushintsha i-akhawunti yakho kusuka kwelinye icebo kuye kwelinye kuya ngohlobo lwedivayisi oyisebenzisayo. Ngakho-ke, kungcono ukulandela izinyathelo ezizolunga kudivayisi yakho.
Ungashintshela kanjani kuhlelo lomfundi we-Apple Music kudivayisi ye-Apple:
Vula izilungiselelo kudivayisi yakho.
Chofoza egameni lakho, bese uthepha kokubhaliselwe.
Thepha kubulungu be-Apple Music.
Thepha ku-Student (Inyanga engu-1)
Izinzuzo ze-Apple Music Student Discount:
Isaphulelo somfundi we-Apple Music sikunikeza ngazo zonke izinzuzo ezifanayo zokubhalisile ngakunye kwe-Apple Music cishe ngentengo uhhafu.Ngakho-ke, uma ungumfundi ungathola isikhathi samahhala sezinyanga eziyisithupha samahhala se-Apple Music, akumangazi yini? Futhi enye ibhonasi ithi, uma isikhathi sakho sesivivinyo sesiphelile, okubhaliselwe kwakho kwe-Apple Music kuzoba uhhafu wentengo ejwayelekile cishe eyi- $ 4.99 ngenyanga yokusakazwa okungenamkhawulo!
Ukuze uthole uhlelo lomfundi we-Apple Music, kufanele ube ngumfundi ofunda noma yiliphi ibanga eYunivesithi noma eKolishi.Ngasekupheleni konyaka ngamunye wokubhaliswa kwabafundi be-Apple Music, uzobona umyalezo okucela ukuthi uqinisekise isimo sakho somfundi kuhlelo lokusebenza lwe-Apple Music noma kwi-iTunes. Ungakhansela ngisho nokubhalisa nganoma yisiphi isikhathi.
Njengomfundi, uthola nezinzuzo ezinjengalezi - futhi ungathola ezintathu zamahhalaisilingo sezinyanga se-Apple TV +. Ubuye uthole isitolo esigxile ku-Apple's Education uma ubhalisela i-Apple Music Students Discount.
Ungasebenzisa i-Apple Music ngamadivayisi we-Apple kanye namakhompyutha weWindows. Futhi, isebenza kahle nezingcingo ze-Android namaphilisi. Ayinalo uhlobo oluthile lwesidingo sedivayisi. Ngakho-ke, noma ngubani angathola ukufinyelela ku-Apple Music kungakhathalekile ukuthi usebenzisa yiphi idivayisi. Konke okudingeka ukwenze ukuqala ukusetha i-akhawunti ye-Apple Music futhi usuqedile. Isaphulelo se-Apple Music Student siyatholakala futhi emazweni angama-80. Lapho isaphulelo sakho siphelelwa yisikhathi, uhlelo lwakho lomfundi we-Apple Music luba okubhaliselwe ngakunye ku- $ 9.99 ngenyanga.
Ungadala i-akhawunti ku-Apple Music manje noma nganoma isiphi isikhathi ofuna ngaso ngezinyathelo ezimbalwa esizinikeze ngenhla ngaphakathi kwemizuzu embalwa futhi uthole ukufinyelela kumculo wabo ongenamkhawulo noma ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
ungangeza kanjani isikhathi sokubonisa ku-roku
I-super smash bros 2 flash ivuliwe
isivivinyo sezinsuku ezintathu se-nord vpn
Ngabe uHlu unesaphulelo sabafundi
ungayisebenzisa kanjani ikhodi ye-psn kusuka ku-amazon